‘झापामा बामगठवन्धनलाई ५ हजार मतान्तरले हराउछु' देउमान थेवे - हिमाल दैनिक
१४ मंसिर २०७४, बिहीबार १८:३८
आम्बेगुदिन ताप्लेजुङ जन्मनु भएका देउमान थेवे २०३९ सालदेखि कुमरखोद झापालाई कर्मथलो बनाएर राजनीतिलाई निरन्तरता दिंदै आउनुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा झापा क्षेत्र नम्बर ४मा नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार रहनुभएका थेवेअहिले मतदातालाई घरघरमा पुगेर भेटिरहनुभएको छ ।
आदिबासी जनजाती समुदायको बाहुल्यता रहेको सो क्षेत्रमा उहाँले आफ्नो उम्मेदवारीको औचित्य, लक्ष्य र चुनावी एजेन्डाको बारेमा धेरै मतदातालाई बुझाई सक्नुभएको छ ।
सिनाम माविबाट २०३६ सालमा एसएलसी दिनुभएका थेबे सोही सालमा भएको विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ पर्नुभएको थियो ।
२०४१ सालदेखि राजनीति सुरु गर्नुभएका थेवे ०४३ सालमा कुमरखोदमा इतर पक्षबाट प्रधानपञ्चमा उठ्नुभएको थियो ।त्यसबेला ४३ मतले पराजित हुनुभएका उहाँ नेपाली कांग्रेस कुमरखोदको गाउँ उपसभापति बन्नुभयो ।
आठौँ महाधिवेशनमा क्षेत्रीय सदस्य निर्वाचित हुनुभएका उहाँ २०४९ सालमा कुमरखोद गाविसको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो ।
२०५४ सालमा दोस्रोपटक कुमरखोद गाविस अध्यक्ष बन्नुभएका थेवे नवौँ महाधिवेशनबाट क्षेत्रीय सभापति र पार्टीको जिल्ला सदस्यबन्नुभयो । थेवेले १२औँ महाधिवेशनपछि झापा कांग्रेसको उपसभापतिको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक सम्हाल्नुभएको थियो । १३औँ महाधिवेशनमा उहाँ महासमिति सदस्य निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
पार्टीभित्र विकासप्रेमी, निडर र स्पष्ट वक्ताको छवि बनाउनुभएका थेवे पार्टीको साह्रोगाह्रो पन्छाउने नेताका रुपमा परिचित हुनुहुन्छ ।आदिबासी जनजाति महासंघको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिसकेका थेवे ‘रिक्स’लिएर काम गर्ने नेताका रुपमास्थापित हुनुहुन्छ। जिल्लामा देखापर्ने विभिन्न खाले समस्यामा जुधेर काम गर्ने स्वभावले थेवेलाई कुशल वार्ताकारका रुपमा चिनाएको छ ।
जनताका एजेन्डामा सफलता हात पार्ने कौशल भएका थेवेको चुनावी रणनीति र योजनाका बारेमा केन्द्रित रहेर गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ः
राजनीतिमा तपाईं कसरी प्रवेश गर्नुभयो ?
म राजनीतिक परिवारकै सदस्य हुँ । मेरा पिता पनि राजनीति नै गर्नहुन्थ्यो ।
बुवाले २०१२÷१३ सालदेखि कांग्रेसको राजनीति गर्दै आएको थाहा पाएँ ।१७ सालमा निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको आएपछि २१ सालदेखि जनपक्षीय प्रधानपञ्च, जिल्ला विकास समितिकोसदस्य हुँदै बुवाले ताप्लेजुङमा राजनीतिक भूमिका निर्वाह गर्नुभयो ।
म त्यही परिवारमा हुर्किएँ । मुलुक बदल्न राजनीति गर्नु पर्दोरहेछ भन्ने कुरा मैले त्यतिबेलै बुझेँ ।मैले २०३५÷३६ सालमा विद्यार्थी राजनीति सुरु गरेँ, ताप्लेजुङको सिनाम माविबाट ।
त्यहाँबाटउत्पादन भएका धेरै विद्यार्थी अहिले राष्ट्रको उपल्लो तहमा पुगेका छन् । मैले पनि त्यही विद्यालयबाट शिक्षा लिएको हुँ ।म सानै उमेरदेखि नेविसंघको राजीनितमा सहभागी थिएँ ।
झापा झरेपछि कुमरखोदबाट राजनीति सुरु गर्नुभएको तपाईंले अहिले झापा–४ बाट टिकट पाउनुभएको छ । कस्तो छ चुनावी माहोल ?
झापामा म जुन ठाउँमा बसेँ, यो ठाउँ (कुमरखोद) कुनै समय जिल्लाको सदरमुकामसमेत थियो ।यहाँ तराई मुलका बासिन्दाको बसोबास बढी छ । यहाँ विभिन्न जातजाति छन् । यहाँ बस्दा मैले सबै जाति, वर्गको भरपूर सहयोग पाएँ ।यहाँ बस्ने मात्र होइन, अरुकोखुशीमा रमाउने, आपतमा सघाउने पनि गरेँ ।
मैले पार्टीको जिम्मेवारी पनि तल्लो तहबाटै निर्वाह गरेको हुँ । एकैपटक माथि आएको होइन म । शून्यबाटै राजनीति सुरु गरेको हुँ ।२०४९ सालमा मलाई जनताले विश्वास गरेर गाविस अध्यक्ष बनाए । २०५४ मा फेरिदोस्रो पटक गाविस अध्यक्ष भएँ ।
साह्रै माया र प्रेरणा पाएँ मैले आदिबासी समुदायबाट पनि । मैले झापाको दक्षिणी क्षेत्रका बासिन्दाको औधि माया र प्रेरणा पाएको छु । म निरन्तर उहाँहरुका लागि काम गरिरहेको छु ।
मेरो निर्वाचन क्षेत्रभरका सबै जातजाति,वर्गबाट धेरै माया र स्नेह पाएको छु । लोकतन्त्रलाई विश्वास गर्ने मतदाता धेरै हुनुहुन्छ ।नेपाली कांग्रेस पुरानो पार्टी हो । कांग्रेसको संघर्ष उहाँहरुले राम्ररी बुझ्नुभएको छ । चुनावी माहोल एकदमै राम्रो छ ।मलाई भोट दिएर मतदाताले जिताउनेमा म पूर्ण विश्वस्तछु ।
तपाईंका प्रतिष्पर्धी १६ हजारभन्दा बढी मतले जित्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि !
उहाँहरु स्थानीय तहको मतपरिणामलाई विश्लेषण गरेर खुशीयाली मनाउँदै हुनुहुन्छ ।
यसरी गणितीय हिसाबले हेर्ने हो भने त पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा जसरी माओवादीले देशभर जित्यो, दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अरु दलले उम्मेदवारी नदिँदापनि हन्थ्यो नि त ! तर, माओवादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा जसरी देशभर जित्यो, ४ वर्ष नजित्दै परिणाम उल्टियो ।
त्यसैले म भन्छु– गणितीय हिसावले राजनीतिमा परिणाम निस्कँदैन । म लगभग ३ देखि ५ हजार मतले जित्छु, यो मेरो दाबी हो ।
तपाईंको निर्वाचन क्षेत्रमा आदिबासीको बाहुल्यता छ । मतदाताले तपाईंलाई नै भोट दिनुपर्ने कारण के छ ?
आदिबासी जनजाति मात्र होइन, यहाँ विभिन्न जातजातिको बसोबास छ । जातीय पहिचानभन्दा पनि म समग्र जातजातिलाई विश्वास गर्छु ।म जन्मे–हुर्केको ठाउँमा पनि राई, लिम्बू थिएनन् ।
हामी ३ घर मात्र राई, लिम्बू थियौँ पहाडमा । अरु सबै क्षेत्री, बाहुन मात्रै ।भट्टराई, डाँगी, बिष्ट, चौहान यस्तै–यस्तै थिए ।त्यो समुदायमा म हुर्किएर जीवनयात्रा सुरु गरेको हुँ ।
म झापा आएर राजनीतिको कर्मभूमि बनाएको ठाउँमा चाहिँ सबै तराईबासी छन् ।राजवंशी, गनगाईं, सतार, कोच, यादव, मुस्लिम, पश्चिमा समूदाय, मारवाडीलगायतको बसोबास छ । मैले सबै जात–जातिबाट माया, प्रेरणा र स्नेह पाएको छु । म विश्वस्त छु उहाँहरुले मलाई नै भोट दिनुहुन्छ ।
तपाईंको प्रतिस्पर्धीले त आफ्नो प्रतिस्पर्धी नै छैन भन्नुभएको छ नि !
त्यसो भए त उहाँले घरैमा सुतिरहँदा भइहाल्थ्यो नि, होइन र ! अस्ति पत्रकारहरुका माझमा उहाँले जनतालाई ३ तले घरमा बसेर सुनको थालमा खिर खाने बनाउँछु भन्नुभयो ।
अहिलेको २१ औँ शताब्दीमा त्यसरी झुक्याउँदा जनता झुक्किन्छन् ? जनतालाई ३ तलेघर, त्यस घरको छतमा बसेर सुनको थालमा खिर खुवाउनका लागि वामगठबन्धन भएको भनेर बोल्नुभयो, मेरा विपक्षी उम्मेदवारले ।
साँच्चै जनतालाई ३ तले घर बनाइदिएर सुनको थालमा खिर खुवाउँछन् भने त हामी सबैले उम्मेदवारी फिर्ता लिँदा भइगो नि ! हामी पनि जनता सम्पन्न बनुन् भनेरै राजनीतिमा लागेका हौँ ।
विपक्षीले त्यसो भनिरहँदा तपाईको चुनाव जित्ने आधार चाहिँ के हो ?
मैले निरन्तर राजनीतिक जीवनयात्रा गरेँ, गरिरहेको छु । हिजो पञ्चायत कालमा प्रतिबन्धित अवस्थामा पनि पार्टी संगठनमा रहेर काम गरेँ । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना भएपछि म पार्टी संगठनको तल्लो तहबाट संघर्ष गर्दै यो तहसम्म आइपगेकोछु ।
विकास निर्माणकै कुरा गर्ने हो भने म २÷२ पटक गाविस अध्यक्ष भएर कमसेकम विकास निर्माणको पद्धति, प्रक्रियााई राम्ररी बुझेको छु ।म निरन्तर जनताका माझमा छु । चाहे बाढी, पहिरो जाँदा होस्, चाहे आपत्–विपद् पर्दा ।
जन्ती, मलामीमा होस् याओल्लो घर, पल्लो घरमा पूजापाठ हँुदा किन नहोस्, म जहाँ पनि पुगेकै छु । अहिले उम्मेदवार हुँदा मात्रै म घर–घरमा पुगेको होइन । मैले त जनताको सुख, दुःखमा साथ दिएको छु ।
अर्को कुरा– मैले निर्वाचनमा खर्च पनि गर्नु परेको छैन ।
स्वतस्फूर्त रुपमा यहाँका जनता र पार्टीका कार्यकर्ताले आफ्नै गोजीबाट २÷४ रुपैयाँ निकालेर सहयोग गरेर मलाई चुनावमा सघाउँदै हुनुहुन्छ। मलाई त्यतिसम्म सजिलो छ । अरुले चुनावमा धेरै खर्च हुन्छभन्छन् तर, मैले त्यो खर्चको अनुभूति गर्नै पाएको छैन ।
मेरा शुभचिन्तकलाई राम्ररी थाहा छ, यो मान्छेले निरन्तर हामीसँग बसेर काम गरेको छ भन्ने कुरा साँच्चै मैले हरेक सुख, दुःखमा जनतालाई साथ दिएको छु, विकास निर्माणका काम गरेको छु । यही नै होमेरो चुनाव जित्ने आधार ।
तपाईं जिल्लाको संयन्त्रमा पनि बस्नुभयो, पार्टीको नेतृत्व पनि गर्नुभयो, के विकास गर्नुभयो तपाईंले ?
कुमरखोदको गाविसको अध्यक्ष हुँदा मैले हेल्थपोष्ट भवन बनाए । विश्व बैंकको पैसाबाट ।झापामा सबैभन्दा पहिलो भीएचएफ टेलिफोन भित्र्याउने मान्छे मै हुँ ।
२०४९ सालमा मैले टेलिफोन लिएर जाँदा सब्जी बजार नै खाली भएको थियो, टेलिफोन हेर्न सबै भेला भएका थिए । सुरुंगा–झापा सडकको रेखांकनमात्रै थियो । मैले समितिको संयोजक भएर काम गरेँ, बाटो बनाएँ । सुरुङ्गा–झापा सडकलाई दानाबारी हुँदै इलाम–कन्चनजंघा सडकमा परिणत गरेर हामीले हरेक साल बजेट छुट्याइरहेका छौँ ।
दुधे–महाभारा–कोरोबारी–बघाहाचौधरी सडक हामीले दक्षिणतिरबाट पिच गरेर ल्याएका छौँ ।अहिलसम्म खालीउत्तरबाट सडक बनाउने परिपाटी थियो । हामीले दक्षिणबाट सुरु ग¥यौँ । उत्तर–दक्षिणका हरेक बाटाहरु हाम्रै अगुवाइमा बनेका छन्, अरुको अगुवाइमा होइन । यो कुरा म गर्वका साथ भन्छु ।
तपाईंले आफैँ शिलान्यास गरेको कुमरखोद–महाभारालाई जोड्ने माईखोलाको पुल चाहिँ कहिले पूरा हुन्छ ?
त्यो पुल ७२४ मिटरको हो । संयोगले मैले शिलान्यास गर्नुप¥यो । वास्तवमा त्यो पुल शिलान्यास गर्न पाउनु मेरा लागि शौभाग्य हो ।मलाई त्यहाँ बोलाइयो, म पुग्दा सबैथोक ठिक्क पारेको रहेछ, शिलान्यास गरेँ ।
त्यसपछि ठेकेदारले निरन्तर एक वर्षसम्म काम ग¥यो, पुरस्कृत नै गर्नुपर्छ जस्तो गरेर । तर,बिचमा ठेकेदारले फेरि धेरै ढिलासुस्ती गरिदियो ।हामी यही विषयमा मन्त्रालयसम्म पनि डेलिगेशन गयौँ ।र, ठेकेदारले अहिले फेरि काम सुरु गरेको छ ।
छिटो काम गराउन सकियो भने अबको दुई–अढाई वर्षमा पुल पूरा हुन्छ । जमिनमूनिको काम पूरा भइसकेको छ ।माथि पनि केही पिल्लर बनिसके । यो पुल निर्माण सम्पन्न गराउन मेरो दायित्व छ । म निरन्तर लागिरहेको छु ।अहिले मसँग प्रतिष्पर्धा गर्नेउम्मेदवारलाई त्यो पुल कहाँनेर पर्छ भनेर सोध्ने हो भने उहाँलाई ठाउँ पनि थाहा छैन ।
तपाईंले चुनाव जित्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ यो क्षेत्रमा ?
म यो क्षेत्रमा धेरै गर्छु भनेर आश्वासन दिने पक्षमा छैन । जनताको जनजीवनमा कमसेकम राहत हुने काम चाहिँ पक्कै गर्छु ।म कसैलाई तीन तले घर बनाइदिन सक्दिनँ । त्यो मेरो पार्टीको नीति पनि होइन ।
कसैले भूकम्पको डरले अढाई तले मात्रै घर बनाउँछन्, कसैले ५ तले पनि ठड्याउँछन् । कसैले एकैतले बनाएर पनि बस्छन् ।सबैलाई तीन तले घर बनाइदिने मेरो कुनै सोच छैन । जनताको जनजीवनमा सामान्य उन्नति प्रगति होस् ।
विकास निर्माणका संरचनाहरु पूरा हुन् । शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाबाट सबै जनता लाभान्वित हुन् ।मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा आदीबासी समुदाय धेरै छ । उहाँहरुका लागि रोजगारीकोसिर्जना मुलुकले गर्नुपर्छ ।
झापा गाउँपालिकामा मैले खानेपानीको कार्यक्रम ल्याएको छु । मैले खानेपानीको योजना ल्याउँदा यो कुमरखोद गाविस नै थियो ।
भर्खर भएको हो झापा गाउँपालिका । एउटा योजना १ करोडको छ । अर्को १३ करोडको योजना हो । सबैलाई थाहा छ, म विकासप्रेमी हुँ ।तसर्थ मलाईजनताले मतदान गर्नुहुन्छ ।
उम्मेदवारको टिकट दिने विषयमा कांग्रेसभित्र विवाद भयो तर, ४ नम्बर क्षेत्रमा तपाईंलाई टिकट दिने विषयमा कुनै हिच्किचाहट भएन । त्यसको कारण ?
यसका लागि चाहिँ मेरो क्षेत्रका समकालीन नेता, कार्यकर्ता, पार्टीका शुभचिन्तकलाई म धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्दछु ।हुनत मैले पनि धेरै नै त्याग गरेको छु पार्टीभित्र । मसँगै यात्रा गर्ने थुप्रै साथीहरु सांसद्, मन्त्री भइसक्नुभयो ।
तर, मैले निरन्तर पार्टीको निर्णय मान्दै हिँडेँ । तसर्थ अहिलेको निर्वाचनमापार्टीले मेरो नाम सर्वसम्मत सिफारिस गर्नु नै मेरो पहिलो जित हो ।मेरो नाम क्षेत्र हुँदै जिल्लाबाट केन्द्रमा पठाउँदा केन्द्रले पनि केही तलमाथि नगरी टिकट दियो ।
टिकट नपाइने पो हो कि भनेर म काठमाडौँ पनि गएँ । तर, केन्द्रीय नेताहरुले निर्वाचन लड्ने तयारी गर्नु भनेर पठाउनुभयो ।म लगत्तै झापाआइहालेँ । टिकट दिने विषयमा अन्य निर्वाचन क्षेत्रमा चाहिँ केही रस्साकस्सी भएकै हो ।
तर, यो क्षेत्रमा यसले पक्कै जित्छ भनेर मलाई टिकट दिइएको हो । यसकै आधारमा पनि म चुनाव जित्छु ।
मतदातालाई के भन्नुहन्छ ?
जुन परिस्थितिमा हामी छौँ, मुलुक दुई ध्रुवीकरणमा छ ।एकातिर वामपन्थी गठबन्धन छ, उनीहरुले संविधान धरापमा पर्ने हुन् कि भन्ने शंका छ । अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गठबन्धन छ ।तसर्थ कांग्रेसलाई पक्कै मतदाताले भोट दिनुहुनेछ ।
लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र बचाउनका लागि र संविधान संस्थागत गर्नका लागिपनि सबैले लोकतन्त्रको अगुवाई गर्ने पार्टीका उम्मेदवारलाई मतदान गरेर विजयी गराउनुहुने छ । म यही आग्रह गर्न चाहन्छु ।
Prevपछिल्लोपराजयको भयले वामपन्थीहरुले अफवाह फैलाएको हाे: मन्त्री विश्वकर्मा
अघिल्लोबाँकेमा वाम गठबन्धनलाई ठूलो झड्का, माओवादी पुर्व कमाण्डर सहित सयौँ कांग्रेसमा प्रवेशNext